ohere ezigbo ala na ụlọ website nkuku ezubere iche
Igbo-Real Estate Ntuziaka ohere
Real Estate Ntuziaka ohere
-Azụ ahịa ma ọ bụ ere Real Estate gị House gị Investment onwunwe.
Eme ya site Revalu8 na i nwere ike ụgwọ ọnwa ma ọ bụ ọbụna ụgwọ ọnwa on ụfọdụ ọzọ Real Estate Ịzụ ma ọ bụ Sale nke di na netwọk gị. Pịa ebe a ma ọ bụ na njikọ n’okpuru.
Ntuziaka ohere ga-akwụ ụgwọ a referral ego mgbe onye aka ekedep a n’ụlọ ma ọ bụ ego na ihe onwunwe ya:
A House, A Unit, a Townhouse, A Ewepụghị, An Investment onwunwe
More Details pịa ebe a ma ọ bụ ma ọ bụ na foto
Ọbụna ma eleghị anya ịzụta ihe Investment onwunwe (s) na Super enweta ego.
Achọ ghaghị haziri ego Njirimara?
Mara onye chọrọ ịzụta a Home. Rụtụ ha revalu8 N’ihi gịnị? N’ihi na ha & ị ụgwọ maka ya.
Onye ị na-ezo ma ọ bụ ụfọdụ n’ime netwọk gị na-ezo na a onye aka ekedep na ego na ihe onwunwe anyị na website na ị na-akwụ ụgwọ maka zuo nke na ihe onwunwe.
Mee a netwọk nke ndị ọ bụla n’ụwa ma ọ bụrụ na otu onye n’ime ha aka ekedep a ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ abụọ onwunwe gị na-akwụ ụgwọ maka ya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ịzụta, ka ị na-akwụ ụgwọ *
* Lee usoro na ọnọdụ na website revalu8 si
** Cornerstonetargeting.com nwere ike ịnweta a ọrụ ma ọ bụ referral ego